Iindaba - Imarike yesitshizi sokutshiza iya kuqwalasela amathuba amahle okukhula kulo lonke ixesha lovavanyo luka-2021-2031 ngasemva kokunyuka kwesicelo esifikelelekayo ngenxa yeepropati zabo ezibanzi.
Ukwanda kolwazi malunga nokwamkelwa kwezitshizi ze-trigger kwimisebenzi eyahlukeneyo kuya kungqineka kuyindlela ebalulekileyo yokukhula ngexesha loqikelelo luka-2021-2031.
Izitshizi ze-trigger zisetyenziselwa ukutshiza iintlobo ezahlukeneyo zolwelo. Ngokuqhelekileyo zenziwe ngeplastiki ye-polypropylene (PP). I-lever ye-trigger, xa idonsa ikhokelela ekusebenzeni kwempompo encinci, efakwe kwi-tube yeplastiki. Intshukumo yokukhutshwa okubangelwa kukutsalwa kwe-lever inyanzela ulwelo ukuba luphume njengenkqubo yendlela enye. Izitshizi ze-trigger ziyalungelelaniswa kwaye zenza ukuba abathengi balungelelanise uhlobo lokutshiza olufana nelomeleleyo okanye inkungu entle. Ezi zinto zinceda ekonyuseni ingeniso kuyo yonke imarike yesitshizi.
Imakethi ye-trigger sprayer iqikelelwa ukuba yanda kwi-CAGR ye ~ 4 yeepesenti ngexesha le-2021-2031 ngokohlalutyo lweqela loPhando lweMarike eNgaphandle (TMR). Imakethi yehlabathi yokutshiza isitshizi yayixabisa ngaphezulu kwe-US$500 yezigidi ngo-2020 kwaye yongezwa ukuba igqithe kuqikelelo lwe-US$800 yezigidi ekupheleni kwexesha loqikelelo, oko kukuthi, ngo-2031.
Abavelisi kwimarike yesitshizi sokutshiza beza noyilo olutsha kunye nokwenza ngokwezifiso ukonyusa ingeniso yabo. Bagxile kakhulu kuphando kunye nemisebenzi yophuhliso efanayo. Ukusetyenziswa okwandayo kwezitshizi ze-trigger kucoceko ngexesha lobhubhani we-COVID-19 kuya kusebenza njengento ebalulekileyo yokukhula kwimarike yesitshizi.
Phonononga amaphepha ali-135 ophando olugqwesileyo, imeko yemarike yangoku, kunye noqikelelo olubanzi lwejografi. Fumana ulwazi ngeMarike ye-Trigger Sprayer (Uhlobo: Izitshizi ezisemgangathweni zeTrigger kunye ne-Chemical-resistant Trigger Sprayers; Ubungakanani beNtamo: 28/400, 28/410, 20/410, 24/410, kunye nezinye; Isicelo: Izithambiso kunye noNonophelo loBuqu, Ukutya kunye neziselo, ukuCoca kunye neeMveliso zokutshabalalisa iintsholongwane, ukuKhathalelwa kweAuto, iiMveliso zeGadi, kunye nabanye; kunye neSitishi soSasazo: kwi-Intanethi kunye ne-Offline) - uHlahlelo lweShishini lweHlabathi, ubungakanani, iSabelo, uHlumo, iNdlela, kunye noQoqosho, ngo-2021-2031 kuTshintsho kunye nokuQaliswa kweMveliso yeNoveli Ukukhonza njengeZiphindaphindi zoHlumo.
Ngemfuno ekhulayo ye-trigger sprayers, abadlali banikela ingqalelo ekuqaliseni iimveliso ezintsha eziluncedo ngakumbi kwaye zilungele abasebenzisi bokugqibela. I-flexible trigger sprayers eyenzelwe yi-PIVOT ngumzekelo weklasi. Isitshizi se-trigger esenziwe yi-PIVOT sinesitshizi esinelungelo elilodwa lomenzi wokutshiza esinehinge ye-pivoting ye-180 degree phakathi kwebhotile kunye nomqheba. Inokuthambeka nakweliphi na icala. Uphuhliso olunjalo lwabadlali kwimakethi yokutshiza ye-trigger inceda ekonyuseni izinga lokukhula ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu.
Hlalutya ukukhula kwemarike yesitshizi sehlabathi kumazwe angama-30+ kuquka i-US, iCanada, iJamani, i-United Kingdom, iFransi, i-Itali, iRashiya, iPoland, iBenelux, iNordic, iChina, iJapan, iIndiya, kunye noMzantsi Korea. Cela isampuli yesifundo
Umzi-mveliso wokuthambisa wokuhlwayela iiMbewu zoHlumo kuyo yonke iMarike ye-Trigger Sprayer
Imfuno yezitshizi ze-trigger kushishino lwezithambiso yonyuke kakhulu ngenxa yoncedo olubonakalayo olunikezelayo. Izitshizi zinciphisa inkcitho yeemveliso zokuthambisa. Abavelisi kwimarike yesitshizi sokutshiza bakwaphuhlisa izitshizi ezinokwenziwa ngokwezifiso ngokwemfuno yomsebenzisi wokugqibela, eyongeza ngakumbi iinkwenkwezi ezongezelelweyo zokukhula.
Ukwanda kokusetyenziswa kwezithambiso ngenxa yokwanda kolwazi malunga nokubaluleka kokuzibonakalisa phambi kwabanye kuya kusebenza njengesantya sokukhula kwimakethi yokutshiza.
Ubhubhani we-COVID-19 wonakalise amathuba okukhula kuyo yonke imarike yesitshizi sokutshiza kakhulu. Ukunyanzeliswa kwezithintelo zokutshixa kunye nokuvalwa kwezixhobo zokuvelisa kukhokelele kwilahleko enkulu. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwesitshizi sokutshiza ngeenjongo zokucoca kukuguqula iitafile zokukhula. Ukuthintela usulelo lwe-COVID-19, kucetyiswa ukuba kugcinwe zonke iindawo zicocekile, ngakumbi iindawo zikawonke-wonke. Lo mba wonyuse imfuno yezitshizi ze-trigger, eziya kuthi ekugqibeleni zincede ekuqhubeleni phambili amathemba okukhula.
Ixesha lokuposa: Aug-06-2021